Poly Unwana Post UTME Closing Date (Deadline) for 2021/2022
Home » latest news » Poly Unwana Post UTME Closing Date (Deadline) for 2021/2022
When is Poly Unwana post UTME closing date for 2021/2022? If you are interested in Poly Unwana post UTME closing date or the deadline for buying Poly Unwana post UTME form then am very happy to inform you that this post you are currently reading contains details regarding Akanu Ibiam Federal Polytechnic Unwana post UTME closing date (deadline).
The general public are hereby informed that Poly Unwana post UTME closing date for 2021/2022 academic session has been provided here in this post.
All those who are interested in Poly Unwana post UTME form are advised to buy and register before the deadline for Poly Unwana post UTME registration published here in this post. You can also checkout Poly Unwana Post UTME exam date.
Poly Unwana Post UTME Closing Date
The deadline for Poly Unwana post UTME registration will be provided here when it has been announced.
If you are yet to register, you can do so as soon as possible. See Poly Unwana post UTME form or list of schools post UTME form.
We are going to update this page as soon as there is any change in information regarding when Akanu Ibiam Federal Polytechnic Unwana post UTME screening registration will be closing. Until then, continue checking this page and bookmark it if you want to get notified when more updates concerning Poly Unwana Post UTME closing date is updated here.